Ny anaran'ny andriambavy Disney: fantaro ny tantarany | Omeo fialamboly aho
Ny anaran'ireo Andriambavy Disney
Misy tontolo majika izay naharihary tamina antsika hatramin'ny nahaterahantsika: ny tiako holazaina dia ny tontolon'ny Disney sy ny tsy manam-petra ny endri-tsoratra noforonina nanodidina azy. Tsy azo ihodivirana ny fampifangaroana ny studio amin'ireo trano mimanda mahasarika, nofinofy, fialamboly ary mazava ho azy: ireo andriambavy mahazatra. Fantaro ny Disney Princesses rehetra sy ny tantarany mandritra ity lahatsoratra ity. Disney Princesses dia misolo tena ny loka sarobidy indrindra amin'ny The Walt Disney Company.
Manana sarimihetsika an-jatony am-polony izahay izay manana ny maha-izy azy ireo tovovavy tsara tarehy misy tantara samy hafa izay mampianatra antsika soatoavina toy ny fisakaizana, herim-po, hatsaram-panahy, fahaleovan-tena, fanajana ny mpiara-belona amintsika ary ny ady ho an'ny tena fitiavana, mba hanonona vitsivitsy. ohatra. Na dia misy aza ny adihevitra manodidina ny fandikana ny tantara tsirairay, tsy azontsika lavina fa fantatry ny sehatra iraisampirenena ny tantaran'izy ireo ary nanamarika ny taona voalohany niainan'ny tovovavy maro hatramin'ny fiandohan'ny taonjato farany. Izany no antony amin'ity indray mitoraka ity ny fizotry ny fandefasana azy dia aseho amin'ny efijery lehibe, ary koa ny famerenana fohy amin'ilay tantara dia nanapa-kevitra ny hitantara ny studio.
Noho ny antony ara-barotra dia zarain'ny studio studio ho an'ny franchise ny toetrany rehetra. Disney Princesses dia nanomboka tamin'ny 1937 ary misy litera iraika ambin'ny folo hatreto: Snow White (1937), Cinderella (1950), Aurora (1959), Ariel (1989), Bella (1991), Jasmine (1992), Pocahontas (1995), Mulán (1998), Tiana (2009), Rapunzel (2010 ) sy Mérida (2012).
1 Blanche Neige
12 Aiza ny sisa amin'ireo andriambavy Disney World?
nisy ny voalohany amin'ireo andriambavy Disney izay nentin'ny fandinihana efijery lehibe tamin'ny 1937 ary izany dia maneho ny fandefasana ny franchise.
Noforonin'i Rahalahy malahelo, Snow White dia andriambavy tena tanora manana fo lehibe: Tiany ny miaina miaraka amin'ny natiora sy ny biby ary nipetraka tao amin'ny trano mimanda niaraka tamin'ny renikeliny ratsy fanahy izay nahatsiaro ho nandrahona foana. Nipoitra ny tantara rehefa nanontany ny fitaratra majika ilay renikelikely ratsy fanahy ary nanambara izy fa ny hatsaran-tarehiny dia nihoatra ny an'ny zafikeliny. Adala amin'ny fitsiriritana ilay mpanjakavavy ratsy fanahy ary nanapa-kevitra ny hanafoana an'i Snow White mba hamerina ny lohateny vehivavy tsara tarehy indrindra ao amin'ny fanjakana; ny vassal tompon'andraikitra dia tsy afaka mamita ny andraikitra nankinina taminy ary nanoro hevitra ny andriambavy mba handositra tsy hiverina intsony.
Nanomboka nanao dia i Snow White izay hihaonany amin'ny dwarves fito miaraka amina toetra mampiavaka azy manokana, tonga mpinamana akaiky indrindra izy ireo ary nanapa-kevitra ny hanasa azy hijanona miaraka amin'izy ireo. Nahagaga ny zava-drehetra, mandra-pahatongan'ny andro ratsy iray dia hitan'ny mpanjakavavy ny akanin-janany vavy ary niseho teo am-baravarany miseho ho vehivavy antitra mila nenina ilay maherifonay. Fankasitrahana, ao anatin'ny drafitra ratsy, nanome valiny ny sainy ilay vehivavy antitra ary nanome azy paoma iray, izay voapoizina. Araka ny efa nampoizina, nianjera ilay tovovavy tamin'ny voalohany ary nianjera tamin'ny torimaso lalina izay tsy hahafahany mifoha velively.
Rehefa niverina avy niasa tany amin'ny toeram-pitrandrahana ireo namany dia nahita ny fatin'i Snow White ary nanenjika ilay vehivavy antitra izay maty rehefa nianjera avy teny amin'ny hantsana. Tsy sahy nandevina azy ireo, ny dwarf fito dia nanapa-kevitra ny hanome voninahitra ny sakaizany sy ny hatsaran-tarehiny amin'ny vata fitaratra izay itondrany voninkazo isan'andro. Fotoana fohy taorian'izay dia niseho ny Printsy Florian izay efa tia azy foana. Rehefa voatosika hahita ny sakaizany miondrika izy dia nanapa-kevitra ny hanome oroka azy izay manaitra azy amin'ny torimaso lalina.
Ny premiere ny sarimihetsika dia nitranga tamin'ny 1950 ary ny toetra dia noforonin'i Charles perrault na izany aza ny kinova malaza indrindra amin'ny angano dia navoakan'ny Rahalahy malahelo.
Ny tantara dia momba ny tovovavy iray izay kamboty reny hatramin'ny nahaterahany ary teo ambany fiahian'ny rainy malalany, izay maty taona maro taty aoriana. I Cinderella kosa tavela eo am-pelatanan'ny renikeliny ary noterena hikarakara ny raharaha ao an-trano izy ary hanome fahafaham-po ny fangatahan'ireo rahavaviny. Manantena tontolo tsara kokoa, dia niezaka foana ny hahita ny lafiny mamirapiratra amin'ny fiainana; Na dia eo aza ny raharaha sarotra isan'andro ao an-trano dia nitahiry ny fanahiny falifaly sy feno hatsaram-panahy foana izy.
Nandritra izany fotoana izany dia nanapa-kevitra ny mpanjaka fa tonga ny fotoana hanambadian'ny zanany lahitokana. Ka nandamina baolina lehibe tao an-dapa izy hisafidianana ny ho vadiny, ny tovovavy rehetra amin'ny fanjakana dia nantsoina tamin'io hetsika io. Cinderella dia nandamina ny akanjony tsara indrindra hanatrehana azy, na izany aza dia nanimba ny akanjony ireo rahavavikely sy ilay renikelikely ratsy fanahy mba hanafoanana ny fahafaha-manatrika ny hetsika satria nanala fotoana ny hatsaran-tarehiny. Marary fo, manomboka mitomany mafy izy.
Minitra vitsy taty aoriana dia niseho ny renin'andriamaniny, izay nampionona azy tamin'ny alàlan'ny famosaviana tamin'ny famosaviana majika ary nanova ireo lamba rovitra nitafy akanjo tsara indrindra azony eritreretina. Ilay teo ihany niaraka tamin'ny silipo fitaratra mamirapiratra sy kalesy manjelanjelatra; na izany aza tsy maharitra ny ody ary hifarana amin'ny misasakalina. Mazava ho azy, raha vao mahita an'i Cinderella miditra ao amin'ilay efitrano ny printsy dia gaga ny hatsaran-tarehiny ary manasa azy handihy. Rehefa avy nitety ny lapa aho ary nankafy ny hariva niaraka tamin'ny printsy mahafatifaty, Nandre ny feon-kira roa ambin'ny folo i Cinderella ary tsy mila fanazavana fanampiny dia nanomboka nihazakazaka nankany amin'ny kalesiny izy. Manenjika azy ilay printsy ary manandrana misakana azy tsy mahomby, ny hany sisa tavela taminy dia slipper iray nianjera tsy nahy nandritra ny sidina.
Raiki-pitia tamin'ilay vehivavy mistery, ny printsy dia nandidy ny hikarohany azy ary mitaky ny hitadiavan'ny mpanompony azy manerana ny fanjakana izy. Nangataka izy mba hotsaraina ilay zazavavy amin'ny zazavavy rehetra ao amin'ilay fanjakana. Taorian'ny andian-java-tsarotra tsy maintsy nolalovan'i Cinderella dia hitan'ny printsy ihany izy ary nanolotra azy. Izany no nahatonga ny mpihetsiketsika ho andriambavy amin'izao fotoana izao.
Fantatra amin'ny anarana hoe Sleeping Beauty izay tantara izay nanomboka tamin'ny 1959 ary noforonin'i Charles Perrault ary avy eo namboarin'ny Brothers Grimm.
Ny teti-dratsy dia miompana amin'ny fanozonana ozona ho an'i Aurora kely, izay zazakely, dia namboarin'ilay lehilahy ratsy fanahy ratsy fanahy izay nanendry ny andriambavy ho resin-torimaso mandrakizay rehefa feno enina ambin'ny folo taona izy ary voatsindron'ny kiran'ny kodiarana mihodina. Ny ozona amin'ny fitiavana marina ihany no azo esorina.
Ny mpanjaka, tamin'ny fiezahana hanafaka ny zanany vavy tamin'ny zava-dratsy tsy nampoizina toy izany, dia nandefa ny zazavavy kely hiaina amin'ny matoatoa telo: Flora, Primavera ary Fauna. Izay nanangana an'i Aurora ho zanak'anabaviny ary nanafina ny tena razambeny mpanjaka. Ny marainan'ny faha-XNUMX taonany, nandefa an'i Aurora ny matoatoa hanangona frezy hanomanana mofomamy ary teo no nihaonany tamin'i Prince Philip izay nihaza tany anaty ala, fitiavana izany tamin'ny voalohany ary nifanaiky ny hifankahita indray izy ireo.
Nentina tany an-dapa i Aurora hankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany ary nilaza taminy ny marina momba ny fiainany taloha, na izany aza dia nofnotisain'i Maleficent izy ary nalefany tany amin'ny toerana lavitra tao an-dapa izay nisy ny faran'ny fanjakana farany teo. Izany no nahatanterahan'ilay faminaniana ary natory tamin'ny torimaso mandrakizay ny Princess Aurora. Nanapa-kevitra ny hiaro azy ao amin'ny tilikambon'ny lapa izy ireo amin'ny fitazonana raozy eo am-pofoany.
Ny matoatoa hita an'i Prince Philip, raha nandre ny tsaho ny fihaonana fohy nifanaovany tamin'i Aurora. Saingy voafandrik'i Maleficent izy ka tsy afaka nanala ny ozona nataony mihitsy. Soa ihany fa nanampy an'i Felipe handositra ny tototry ny Maleficent ireo matoatoa izay lasa dragona mampidi-doza. Taorian'ny fifanandrinana sarotra dia nandresy ilay andriana ary farany afaka nihaona tamin'i Aurora indray hanoroka azy ary mamadika ny ozona.
Zanakavavin'ny mpanjaka Triton, Ariel dia zazavavindrindra kely izay feno fiainam-be ny fiainany ambanin'ny ranomasina. Navoaka tamin'ny 1989 ny sarimihetsika nampiavaka azy ary ny toetra amam-panahy dia noforonin'i Hans Christian Andersen.
Ny fiheverany an'izao tontolo izao ivelan'ny ranomasina, naka ny The Little Mermaid mba hizaha ny tany imbetsaka ao amin'ny orinasa naman'i Sebastián sy Flounder namany akaiky indrindra. Tao anatin'ny iray tamin'ireo zava-niainany dia nahita maso tafio-drivotra mahery i Ariel izay tandindomin-doza ireo ekipazy. Tao no nihaonany tamin'i Eric, andriana tsara tarehy iray izay novonjeny ary nentiny teny amoron-dranomasina. Raiki-pitia izy tamin'ny fahitana voalohany ary nanomboka nihira ho azy. Rehefa tonga ny zanak'andriana dia nanam-potoana hihaino azy sy hahita ny endriny izy; na izany aza tsy maintsy nandositra segondra i Ariel taty aoriana satria nisy olona hafa namonjy an'i Eric.
Noraran'ny mpanjaka i Ariel tsy hiverina eo ambonin'ny tany; tapa-kevitra ny hahita an'i Eric anefa izy. Izany no antony anaovany fifanarahana amin'ny mpamosavy mahery indrindra any amin'ny ranomasina: Úrsula. Izay nampanantena ny hamadika azy ho olombelona ho takalon'ny feony mahafinaritra ao anatin'ny fepetra iray: Raha tamin'ny andro fahatelo tety an-tany dia tsy nahazo ny fanorohan'ny printsy izy dia hiverina any amin'ny ranomasina i Ariel ary ho andevony. Nanaiky tsy nisy fisalasalana ilay Little Mermaid ary nipoitra tamin'ny tontolo ivelany izay nahitany an'i Eric haingana, fantany avy hatrany ny tarehiny ary nanontaniany ny anarany hoe Ariel. Tsy afaka mamaly izy satria tsy nanana feo. Diso fanantenana izy ka mieritreritra fa tsy vadiny tsy fantatra izy, fa amin'ny fomba mitovy amin'izany, manolotra trano i Eric ary tamin'izay fotoana izay no nameloman'ny coexistence ny fisarihana niseho tamin'ny fihaonan'izy ireo voalohany.
Tamin'ny andro fahatelo dia nisy vehivavy iray nihira teny amoron-dranomasina, tamin'ny fotoana nandrenesan'ilay printsy azy, dia nopetahana sary an-tsaina izy ary nanapa-kevitra ny hanambady azy satria fantany fa izy no vehivavy nanavotra ny ainy. Vantany vao nandre ny vaovao i Ariel, dia kivy tanteraka. Ny naman'i Scuttle, vorona amamaso, dia nahita fa Ursula ilay sipa ho avy. Ka namolavola drafitra hampitandremana ny Mpanjaka Triton izy ary hanao sabotage ny fampakaram-bady.
Eo afovoan'ny tantara an-tsehatra misy ny biby an-dranomasina dia tonga ny takariva fa tsy vita ny mariazy ary Ariel sy Úrsula niverina tamin'ny endriny voalohany. Amin'izay fotoana izay dia tsapan'ny printsy ny hadisoany ary niezaka nanavotra an'i Ariel, na izany aza tara izany ary nifanaiky hajaina i Ariel. Triton dia mitaky ny fahafahan'i Ariel ary manolo-kevitra ny hiova toerana aminy. Faly dia manaiky sy mandray ny fanjakana ilay mpamosavy. Fotoana vitsy taty aoriana dia niseho i Eric ary nandratra ny mpamosavy tamin'ny harpoon, ka nahatonga ny lozam-pifamoivoizana iray izay namarana ny ain'ny zanakalahin'ny tantsany. Amin'ny fahatezerana dia mitombo habe i Úrsula ary lasa olona goavambe ary miteraka tafio-drivotra amin'ny tadio ao anaty ranomasina.
Tandindomin-doza i Eric sy i Ariel, saingy tao anatin'ny vintana kely fotsiny dia nahita sambo nilentika i Eric izay nahavita nitily ilay bowsprit tamin'ny vatan'i Úrsula, ary nahatratra ny fahafatesany tamin'ny farany. Niaraka tamin'izay dia nofoanana ny ozona rehetra natolotry ny mpamosavy ary navotsotra indray i King Triton. Noho ny fahatsapany ny tena fitiavana ananan'ny zanany vavy sy ny andriana, dia nanome alalana an'i Eric hanambady ny zanany vavy i Triton namadika an'i Ariel ho lasa olombelona indray ka hiaina sambatra mandrakizay izy ireo.
Hatsarana sy ny biby navoaka tao amin'ny teatra tamin'ny 1991 ary miorina amin'ny tantara noforonin'i Jeanne Marie Leprince de Beaumont.
Bella dia tovovavy tena marani-tsaina sy be faniriana tsy afa-po amin'izay atolotr'izao tontolo izao azy; Mipetraka miaraka amin'i Maurice rainy izy ary andevozin'ny famakiana. Gastón no anaran'ilay mpanenjika azy, mpihaza fanta-daza nolavin'i Bella foana izy. Manomboka ny horonantsary fony taloha, ny andriana tia tena dia nofaizin'ny mpamosavy antitra rehefa tsapany fa tsy nisy hatsaram-po tao am-pony: natodiny ho biby fiompy izy ary namosavy ny tranony iray manontolo, isan'izany ny olona rehetra ao aminy. Ny fomba tokana hanorotoroana ny ody dia ny fitiavan'ny olona iray ho tia azy alohan'ny hamonoana ny raozy iray mahafinaritra.
Etsy ankilany, ny rain'i Bella dia voasambotra tao amin'ny trano mimanda. Nandeha namonjy azy izy ary nifampiraharaha tamin'ny biby tamin'ny alàlan'ny fifanakalozana ny fahafahany ho an'ny rainy. Mihidy ny fifampiraharahana ary manomboka mihaona amin'ireo mpiresaka sy zavatra mampiantrano olona mampiantrano azy ilay mahery fo. Taorian'ny tsy fahazoana ny hevitry ny biby, Bella nandositra ny trano mimanda. Teo afovoan'ny ala dia nifanena amboadia noana izay saika hanafika azy izy, tamin'izay fotoana izay dia niseho hanavotra azy ilay biby. Nanamarika ny fiandohan'ny fisakaizana lehibe io tranga io rehefa niverina tao an-dapa i Bella ary nanomboka nankafy ny fijanonany tao.
Mandritra izany fotoana izany ao amin'ny tanàna, Nikasa ny hahazo fanampiana ilaina i Maurice hanavotana ny zanany vavy. Na izany aza, tsy naharesy lahatra olona hanampy azy izy mandra-pahatongan'i Gastón hevitra hiampangana azy ho tsy salama saina ary hanery an-dry Bella hanambady azy ho takalon'ny fisorohana ny famonjen'ny rainy azy any amin'ny hopitaly ara-tsaina.
Niverina tao an-dapa izy, nanapa-kevitra ny biby handamina sakafo hariva lehibe ho an'i Bella, efa raiki-pitia taminy izy ary nila raha averina ny fitiavany. Tamin'ny faran'ny hariva, nanolotra an'i Bella ny Biby hahita ny rainy amin'ny alàlan'ny fitaratra majika ary mahita sary tsy mahafinaritra an'ny rainy amin'ny toe-javatra sarotra; Ka ny biby dia manafaka azy hahafahany mamonjy azy. Nomeny azy ny fitaratra ary nandao ny trano mimanda izy, namela ny bibidia sy ny mpanompo rehetra namaky fo. Very ny fanantenana hanapahana ny ody ary efa lany ny fotoana.
Rehefa hitan'i Bella ny rainy dia entiny mody izy hikarakara azy. Fotoana vitsy taty aoriana dia niseho niaraka tamin'ny dokotera avy amin'ny hopitaly ara-tsaina i Gastón miampanga an'i Maurice ho hadalana, maro ny mponina no niaraka taminy. Nanao ny tolotra i Gastón: ny tanan'i Bella ho takalon'ny fahalalahan'ny rainy. Nandà i Bella ary nanoro azy ireo ilay biby tamin'ny alàlan'ny fitaratra majika hanamarinana fa salama saina ny rainy. Notarihin'i Gastón, nanapa-kevitra ny hamono ny biby ny mponina satria heverin'izy ireo fa mampidi-doza izy. Bella dia manandrana misoroka ny fanenjehana ary mihidy ao amin'ny lakaly ambany, na izany aza dia nahavita nandositra izy noho ny Chip, kaopy miresaka izay nanaraka azy rehefa nandao ny lapa izy ireo ary nanomboka ny dia niverina tany amin'ny lapa izy ireo mba hampitandrina ny biby.
Tsapan'ny mponina ao amin'ny trano mimanda ny fandrahonana efa antomotra, namelabelatra drafitra fanafihana iray izy ireo ary nahavita nandroaka ny mponina rehetra ankoatra an'i Gastón. Tapa-kevitra ny hamono ny Biby izay nanjary tian'i Beauty izy., ka rehefa hitany dia mipoaka ny ady lehibe. Bella dia nahavita naka sary an-tsaina azy ireo rehefa tonga tao amin'ny lapan'ny mpanjaka izy ary nihazakazaka nanakana ny ady.
Tamin'ny fotoana nahitan'ny Bibidia indray an'i Bella, dia niverina indray ny fikasany hiaina ary ao anatin'ny fotoana misavoritaka dia nanafika azy avy any aoriana i Gastón, ka niteraka ratra saika nahafaty azy. Amin'izao fotoana manaraka izao dia maty i Gastón rehefa nianjera avy teo amin'ny iray amin'ireo tilikambon'ny lapa izy. Nihazakazaka nanampy ny Biby i Bella ary rehefa niaiky ny fitiavany izy dia tsy nahatsiaro tena ary nitomany mafy i Bella. Segondra vitsy dia manomboka ny ranonorana hazavana izay manova tsikelikely ny biby ho lehilahy tsara tarehy, Fantatr'i Bella avy hatrany izy ireo ary nofehezin'izy ireo tamin'ny oroka ny fitiavan'izy ireo. Vaky ny ody ary lasa vahoaka indray ny mponina rehetra.
Izy no protagonista an'ny malaza sarimihetsika aladdin, navoaka tamin'ny 1992, ny tantara tany am-boalohany dia ampahany amin'ny boky The Thousand and One Nights of Syrian origin and which was translate by Antoine galland.
Jasmine dia zanakavavin'ny tanànan'i Agrabah, mahatsapa ho sempotry ny fiainana feno fameperana takiana amin'ny toeran'ny mpanjaka izy, ka nanapa-kevitra ny handositra ny lapa niakanjo toy ny sarambabem-bahoaka izy. Io dia eo amin'ny iray amin'ireo dia an-tongotra nihaonany tamin'i Aladdin, mpangalatra tanora izay gidro ny sakaizany akaiky indrindra. Niara-nandany ny tolakandro izy ireo ary niresaka mandra-pahalalan'izy ireo, tamin'ny faran'ny tolakandro dia voasambotra i Aladdin. Nanambara ny momba azy ilay andriambavy ary nitaky ny famotsorana ny sakaizany, na eo aza izany, miala tsiny ireo manamboninahitra milaza fa baiko mivantana avy amin'i Jafar izy ireo ary tsy azo ankatoavina. Nandeha tany Jafar avy hatrany i Jasmine hangataka ny hamotsorana an'i Aladdin, na izany aza dia mandainga aminy i Jafar ary nilaza fa novonoina ho faty.
Nandositra i Aladdin ary nirahina hanao iraka izay ahazoany jiro majika sy karipetra manidina. Ny jiro dia nisambotra génie izay hanome fanina telo ho an'ny tompony. Ka nanapa-kevitra ny hanaraka an'i Jasmine malalany izy ary te ho lasa andriana. Manome ny faniriany ilay génie ka manana fotoana mety hanatrehana ny lapan'ny mpanjaka izy hanambarana ny andriambavy ary hanana fotoana hanambadiana azy. Aorian'ny fitsangatsanganana an-pitiavana Fantatr'i Jasmine izy ary nanazava i Aladdin fa mampiasa akanjo toy ny olona mahazatra ihany koa izy mba hialana amin'ny fiainany.. Raiki-pitia izy ireo ary nanapa-kevitra ny hanambady.
Rehefa hitan'i Jafar ilay jiro majika dia hitany ny sarin'i Aladdin ary azony ny tanàna: nosamboriny ny sultan sy ny andriambavy ary nanambara ny tena mombamomba an'i Aladdin. Ary farany ilay olon-dratsy dia lasa faran'izay mahery indrindra eo amin'izao rehetra izao noho ny filàny ary mihidy ao anaty jiro majika amin'ny fandrika. Afaka nihaona tamin'ny Aladdin malalany ihany ilay andriambavy tamin'ny farany ary nahazo ny alalan'ny sultan hanambady izy ireo.
Izy irery no andriambavy fiaviana amerikana. navoaka tamin'ny fandalinana tamin'ny 1995 ary noforonin'i Glen Keane.
Vehivavy tanora manana fanahy malalaka sy tanjaka be izy. Zanaka vavimatoan'ny lohan'ny foko izy ary efa hatramin'ny fahazazany dia nifamofo tamina mpiady manan-danja antsoina hoe Kocoum; na izany aza tsy tsapany mihitsy ny tena fitiavana azy.
Rehefa tonga ao an-tanànany ireo mpivahiny dia mihaona amin'i John Smith, izay manomboka fisakaizana ary mihalalina ny fahatsapany. Rehefa tsapan'ny fianakavavin'ilay andriambavy ny toe-javatra dia nanohitra an'i John izy tamin'ny lalao maty an'i Kocoum. Nosamborin'ny foko i John ary nohelohiny ho faty.
Mamonjy ny malalany amin'ny famonoana olona i Pocahontas, na izany aza tsy mitohy ny fitiavany satria tsy maintsy miala any London i John Smith ary tsy afaka miaraka aminy izy. Miato kely ny fitiavan'izy ireo ary manao veloma.
Nanomboka tamin'ny seho lehibe tamin'ny 1998 izy, Vehivavy be herim-po teraka avy any Azia izy ary na dia tsy manana anaram-boninahitry ny mpanjaka aza izy, dia nasandratra ho andriambavy noho ny zava-bita lehibe vitan'ny fireneny.
Ny drafitra dia niseho nandritra ny ady iray izay tsy maintsy nandefasan'ny fianakaviana tsirairay avy ny ady. Nandritra izany fotoana izany, i Mulan dia teo am-piofanana mba ho tonga vady fakan-tahaka. Tsy faly tamin'ny lahatra efa voatendriny izy ary nanapa-kevitra ny handositra ny tranony hanampy ny olony amin'ny ady. Mody izy dia lehilahy ao amin'ny fianakaviany ary manomboka ny fiomanany amin'ny ady.
Rehefa avy nihemotra maro dia azony ihany ny farany ny fahaizana ilaina ary noho izy sy ny paikadiny dia maharesy izy ireo amin'ny ady ary manakana ny fahafatesan'ny amperora. Fantatry ny vahoaka ny fihetsik'izy ireo maherifo ary fahatsiarovana azy tamin'ny alàlan'ny fanolorana azy andraikitra lehibe ao amin'ny tafika, izay nolaviny tsy hiverina any amin'ny fianakaviany.
Izy no protagonist an'ny sarimihetsika Tiana y el Sapo, izay navoaka tamin'ny 2009. Mampiavaka azy ny maha-andriambavy voalohany loko ao anatin'ny tontolon'i Disney. Miorina amin'ny boky nosoratan'i ED Baker sy ny Brothers Grimm.
Tiana dia tanora mpandroso sakafo izay manonofy indray andro any hanana trano fisakafoanana ho azy, nanana ny toerana tonga lafatra tao an-tsaina izy. Na izany aza dia fantany fa efa saika hamidy amin'ny mpanolo-tena tena tsara io toerana io ary potika ny nofinofiny.
Tao no nihaonany tamin'ny Printsy Naveen, nivadika toad ho an'ny fiainana feno, tsy miraharaha ary kamo kamo. Ny printsy dia mitazona izany endrika izany mandra-pahazoany oroka, noho izany dia resy lahatra i Tiana hanoroka azy ho takalon'ny fanomezana azy ny ampahany amin'ny hareny hahatratrarana ny nofinofy ho tompon'ny trano fisakafoanana ao aminy. Manaiky izy fa diso ny tetika ary i Tiana niafara nivadika ho amfibiana ihany koa, ka nanao traikefa nahafinaritra izy roa lahy nitady pretra voodoo hangataka ny fanampiany.
Ny dia dia feno lesona amin'ny fiainana ary miafara amin'ny fitiavana ny toetrany izy ireo ka nanapa-kevitra ny hanambady, na dia amin'ny endrik'izy ireo aza. Mahagaga ihany, amin'ny famehezana ny fanambadian'izy ireo amin'ny oroka, samy miverina ho olombelona ny olona roa tonta ary lasa andriambavy i Tiana.
Tangled, no lohatenin'ilay sarimihetsika nilalaovany ary nivoaka tamin'ny 2010. Miorina amin'ny iray amin'ireo tantara noforonin'ny Brothers Grimm izy io. Ity no sarimihetsika andriambavy Disney voalohany solosaina novokarina tamin'ny sarimiaina 3D.
Rapunzel dia miavaka amin'ny volony lava lava. Ary ny tantara dia milaza ny nahaterahany sy ny fety nataon'ireo mpanjaka ho fanomezam-boninahitra azy, na izany aza dia nalaina ankeriny izy ary notezain'i Gothel ratsy fanahy izay nitana azy ho babo tao amin'ny tilikambo iray mba hanararaotra ny herin'ny maizina hita tao amin'ny volony. Nandritra ny 18 taona dia niaina ny printsy vavy fa i Gothel no reniny ary mampidi-doza loatra ny any ivelany.
Mandritra izany fotoana izany ao amin'ny lapa dia nisy ny fandrobana, ny iray tamin'ireo mpangalatra dia nitsoaka ary nahita fialofana izay niafenan'i Rapunzel tamin'izao tontolo izao. Nanapa-kevitra ny hianika ilay tilikambo izy, ka niady ilay andriambavy ary nandondona azy tsy nahatsiaro tena. Avy eo, nanangona hery hivoahana amin'ny tontolo ivelany izy, nahita ny marina tamin'ny lasa ary raiki-pitia tamin'ilay mpangalatra antsoina hoe Eugene izay nanambady farany.
Ilay mpilalao sarimihetsika Indomitable, Merida dia andriambavy volo tanora ary ny tantarany dia noforonin'i Brenda Chapman ary napetraka tany Ekosy medieval. Novokarin'i Pixar sy Disney.
Ny toetrany tsy mihetsika dia nanosika azy hanapa-kevitra manokana amin'ny fiainana satria nanome toky ny ray aman-dreniny hanambady ny zanakalahin'ny iray amin'ireo mpiara-dia aminy, fitsaboana izay nolavin'i Mérida ary miteraka korontana ao amin'ny fanjakana noho ny fanambin'ny fomban-drazana. .
Ny andriambavy dia mitady fanampiana amin'ny vehivavy antitra izay nifampiraharaha taminy hanovana ny anjarany amin'ny alàlan'ny tsipelina, izay manova azy ho orsa. Miaraka amin'ny fanampian'ny renin'izy ireo dia mitady hamadika ny ody izy ireo amin'ny alàlan'ny andian-tantara maromaro izay mahatonga an'i Mérida hianatra ireo soatoavina manan-danja indrindra amin'ny fiainana.
Ny tantaran'i Merida dia hafa noho ny an'ny andriambavy Disney hafa, tsy mifantoka amin'ny fitiavany andriana izany. Fa kosa, miresaka bebe kokoa momba ny fifandraisan'ny mpirahalahy sy ny ray aman-dreny izy, amin'ny fomba mitovy amin'ny olana misy ankehitriny toy ny fahatsapana fahaleovan-tena sy fikomiana azon'ny tanora aseho.
Satria mbola mitombina ireo tantara, Nanapa-kevitra ny Disney ny handefa indray ireo kinova mihetsika mivantana amin'ny fahombiazana lehibe: Cinderella tamin'ny 2015 sy Beauty and the Beast tamin'ny taona 2017. Nambara fa hivoaka amin'ny taona manaraka ny kinova Aladdin sy Mulan.
Aiza ny sisa amin'ireo andriambavy Disney World?
Ho fanampin'ny Disney Princesses izay mandrafitra ny franchise, misy maro hafa manana tantara mifandraika amin'ilay fandinihana. Toy izany ny an'i Elsa sy i Anna (Frozen: ny fanjakan'ny ranomandry), ary koa ny Princess Sofia, Moana, Megara (Hercules) ary Esmeralda (The Hunchback of Notre Dame). Na izany aza, tsy raisina ho ao anatin'ny franchise izy ireo satria vao haingana na tsy dia nahomby loatra ny fandefasana azy ireo, izany koa dia satria misy ny sasany mahita fahombiazana lehibe samirery.
na izany aza tena azo inoana fa satro-boninahitra izy ireo amin'ny taona vitsy manaraka satria manavao hatrany hatrany ny franchise izay misy hatramin'ny fitafiana ka hatramin'ny mpikambana vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Omeo fialamboly aho » Cine » Ny anaran'ireo Andriambavy Disney
Ahoana ny fomba hikarohana sarimihetsika nefa tsy fantatra ny anarany